Antony tsy maintsy hivavahan’izy ireo tsy mitsahatra, indrindra amin’ny andavanandro ny hanampiana ireo olona tojo olona maro samihafa toy ny vehivavy narian’ny vadiny na hiharan’ny herisetra, ireo manana olana ara-tokantrano, ireo tsy salama asa izay tsy maintsy ampiana sy tohanana am-bavaka hiarovana azy tsy hamoifo. Ankoatra izay, efa trano notapenana ny varavarana, tsy misy afa-tsy bafla kely roa tao amin’ilay fiangonana vahao ny oloko teny Tanjombato Samaf izay nakatona nefa dia nolazaina fa nanakorontana tokantrano miisa 400. Izay no marina, hoy pastera Heritiana Randriarimalala ary afaka mijery izany mivantana ny mpanao gazety. Nitondra am-bavaka ny firenena tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ity fiangonana iray ity ny sabotsy teo. Ankoatra izay dia nankalaza ny faha-20 taona nanosorana ny Raiamandreny mpitandro Heritiana Randriarimalala mivady ihany koa izy ireo, notronin’ireo mpino Kristiana marobe avy amin’ny fiangonany sy ny fiangonana hafa. Kristianina matotra, mandray ny anjara lovany, no lohahevitra novoaboasana tamin’izany. Raha tsiahivina kely dia tamin’ny taona 1979 no niorina ny fiangonana Vahao ny oloko. Tany Toamasina no nipoiran’io anarana io voalohany ary efa mielipatrana manerana ny fokontany sy kaominina maro izy ankehitriny.